Kuhlangana Xiao kufa, Ebukekayo Companion Doll Wakha ukuba Nceda Lonely Abantu kwi-China Tech iindaba namhlanje
China sele ngakumbi abantu kunokuba abafazi, nto leyo yenza kube nzima ngakumbi kuba izigidi abantu kweli lizwe ukufumana zabo ibhinqa iqabane lakho. Ukunceda nceda lonely Isitshayina abantu, EXDOLL, ngesondo doll umzi-mveliso, wenziwe ukuba siphuhlisa ebukekayo companions ukuba unako iinkozo zabo abanini-mhlaba kunye nokwenza eminye imisebenzi, kakhulu. Kuhlangana Xiao kufa, inkampani s uninzi nje irobothi companion ukuba sele isakhono incoko abayo abanini-mhlaba, ukudlala umculo, nize nenze dishes.
Ingaba Xiao kufa umsebenzi? Abantu banako ulawulo Xiao kufa njengokuba companion doll nge smartphone nge-app ngokulula usebenzisa ilizwi imiyalelo efana nale inkcazo emfutshane s Siri, kodwa hayi njengoko babemsulwa. A ebukekayo companion irobothi ezifana Xiao kufa akubonakali t kuza nge cheap ixabiso tag, nangona kunjalo.
I-ngesondo doll inkampani ngu charging dolla, ngamnye irobothi
Abantu baya kwazi ukuba ngokusesikweni abalingane babo yabo liking. Oku kuthetha ukuba banako khetha breast ubungakanani, ubude, umbala imigca enqamlezeneyo, iliso, iinwele umbala ngenxa yabo dolls. Ukususela yayo s a ngesondo doll, inkampani kanjalo zinika abantu ukhetho lokugqiba kangakanani pubic iinwele abazithandayo i-doll ukuba unayo. Ezinye ngakumbi ethandwa kakhulu companion dolls kuba pale imigca enqamlezeneyo, kuba inkulu breasts, kwaye kuma ku malunga iinyawo i-intshi. Ezinye dolls ingafunyanwa wearing esikolweni kubekho inkqubela skirts, nangona, inkampani bathi aren t nicinge ukuba bamele abantwana.
I company ithi yayo imbono ngu ukwenza ebukeka irobothi powered by artificial iingqiqo
Kukho sele ilungile irobothi ubugcisa kwaphuhliswa, ngoko ke sifuna concentrate on ekubeni a irobothi kunye ebukeka ubuso, kwaye hottest umzimba, uthi Qipao Qu, oyintloko wophuhliso igosa e EXDOLL nemizi-mveliso inkampani kwi-China. Kunyaka olandelayo, umzi-mveliso izicwangciso ukongeza ezinye ngakumbi iimpawu ukuba companion doll. Ezi ziquka akunakho kuba complex zomzimba, facial yenza ingxenye yesakhelo, kwaye amehlo ukuba unako landela apho abantu bamele sinyuka. I-ebukekayo companion dolls ingaba yenzelwe ngoko ke babe nokutya kubalulekile iincoko kunye abantu bancede ngaphandle jikelele indlu.
Babe nkqu nako ukuncedisa njengoko receptionists okanye assistants